C/raxmaan Ceynte oo Farriin kulul u diray Farmaajo & Kheyre [Waa inaan qooq siyaasadeed laga qaadin is-casilaadda Jawaari] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
C/raxmaan Ceynte oo Farriin kulul u diray Farmaajo & Kheyre [Waa inaan qooq siyaasadeed laga qaadin is-casilaadda Jawaari]
Wasiirkii hore ee Qorsheynta dowladii hore ee Soomaaliya C/raxmaan Yuusuf Ceynte oo mar soo noqday xoghayihii madaxweyne Farmaajo ayaa farriin culus u diray Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya.
Isagoo ka hadlayay is-casilaadii Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayuu uga digay madaxda sare inaysan wax uu ugu yeeray qooq siyaasadeed ka qaadin is-casilaadda Jawaari, wuxuuna soo jeediyay sadex qodob oo muhiim ah.
HOOS KA AKHRISO FARRIIN C/RAMMAAN CEYNTE
Waxaan codkeyga ku biirinayaa jamaahiirtii u mahad celisay Guddoomiye Jawaari, sida xilkasnimada iyo waayeelnimada leh ee uu isku casilay, isagoo u turay guud ahaan dowladnimada Soomaaliya, gaar ahaan midnimada Golaha Shacabka. Siduu khudbaddiisa ku sheegay, waalidka ayaa ubadkiisa uga laxaw badan kuwa aan dhalin, balse sheegta. Guul-darradiisii siyaasadeed ayuu u rogay libin qarannimo.
Haddaba, maxaa haatan la gudboon hoggaanka dalka?
1. Inaan qooq siyaasadeed laga qaadin is-casilaadda Jawaari, balse loo arko fursad dahabi ah oo lagu asteyn karo xasillooni siyaasadeed, taas oo ku saleysan wadar-oggol. Wadiiqadda kali-telis waa middii noo horseedday dagaalkii sokeeye, kamana hirgali karto gayiga Soomaaliya.
2. In xoogga iyo xoolaha qaranka lagu bixiyo sidii cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab loo wiiqi lahaa, shisheeyaha dalkeenna kusoo qamaamayna la isaga caabbin lahaa.
3. In la ilaaliyo sarreynta sharciga, oo ay ugu horreyso kala madax-bannaanida laamaha dastuuriga ah ee dalka, sida: Fulinta, sharci dajinta iyo garsoorka. Isku milankoodu wuxuu naafeeyaa hannaanka dimoqraadiyadda, wuxuuna horseedaa burbur.
Haddiise is-casilaadda Jawaari lagu badsado dhibco siyaasadeed, waxaa halis loogu jiraa fitno aan laga soo waaqsan muddo dheer.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo: “Jawaariyow anigaa tanaasulay, iyadoo dadku i rabo, wuxuuna Alle igu bedelay..” [Daawo]
Next articleDowladda Ruushka oo Mareykanka uga digtay Dagaal toos ah oo ku dhex maraya Dalka Suuriya